Hello Nepal News » ‘मेस्सीले विश्वकप जित्न सक्दैनन्, यसपालिको कोपा अमेरिका अन्तिम मौका’
‘मेस्सीले विश्वकप जित्न सक्दैनन्, यसपालिको कोपा अमेरिका अन्तिम मौका’
एजेन्सी, चैत १०
अर्जेन्टिनाका सुपरस्टार लिओनल मेस्सीले क्लब बार्सिलोनाका लागि आजसम्म कूल ३४ उपाधि जितिसकेका छन् । त्यहींबाट उनले ६ वटा बालोन डिओर, ६ वटा गोल्डेन बुट जितिसकेका छन् । आज मेस्सीलाई कम्तीमा पनि सबैले फुटबल दुनियाँका थुप्रै महान् मध्येका एक खेलाडीका रूपमास्वीकार्छन्, यसमा दुईमत नै छैन । तर, उनै मेस्सीले आजसम्म आफ्नो देशबाट केही पनि जित्न सकेका छैनन् । उनले उमेर समूहबाट ओलम्पिकमा उपाधि जिते पनि सिनियर टोलीबाट आजसम्म उनका नाममा जिरो उपाधि नै हो । जसका कारण अर्जेन्टिनामा मेस्सीको बेला–बेला चर्को आलोचना हुने गर्छ । उनले देशलाई केही न केही उपाधि जिताउन् भन्ने धेरैको चाहना छ ।
मेस्सीसहितको अर्जेन्टिना एकपटक विश्वकपको फाइनलसम्म पुग्यो भने दुईपटक कोपा अमेरिकाको फाइनलमा पुग्यो । तर, यी तीनवटैमा मेस्सीले देशलाई उपाधि जिताउन सकेनन् । आफ्नै कप्तानीमा तीन–तीनपटक फाइनल पुगेर पनि पराजित हुनु सम्भवतः मेस्सीका लागि दुर्भाग्य नै होला । सन् २०१६ मा त मेस्सीले कोपा अमेरिकाको फाइनलमा चिलीसँग पेनाल्टी सुटआउटमा आफ्नै कारणले हारेपछि निराश र विचलित बनेर सन्यास नै लिएका थिए । तर, पछि उनले सन्यास फिर्ता लिए । मेस्सी अहिले पनि अर्जेन्टिनाका कप्तान हुन् । उनकै कप्तानीमा अर्जेन्टिनाले यस वर्ष कोपा अमेरिका र अर्को वर्ष फिफा विश्वकप खेल्दैछ । चाँडै ३४ वर्ष पुग्ना लागेका मेस्सीका लागि यी दुई प्रतियोगिता करिअरका अन्तिम प्रतियोगिता हुनेछन् । के मेस्सीले यीमध्ये कुनै एक उपाधि देशका लागि जित्न सक्लान् ?
बार्सिलोनामा विगतमा कुनै बेला सँगै खेलेका लिजेन्ड खेलाडी इरिक अबिडालले मेस्सीको अन्तर्राष्ट्रिय करिअर र उपाधिबारे धारणा राखेका छन् । हालसालै एक ताजा अन्तर्वार्तामा कुरा गर्दै फ्रेन्च खेलाडी अबिडालले मेस्सीका लागि यस वर्ष हुने कोपा अमेरिका प्रतियोतिगा देशको जर्सीमा उपाधि जित्ने अन्तिम अवसर रहेको बताएका छन् । अबिडालले मेस्सीले विश्वकप जित्न नसक्ने भन्दै यस वर्ष कोपा उनका लागि केही न केही जित्ने अन्तिम मौका रहेको बताएका छन् । अबिडालले मेस्सीलाई २०२२ को विश्वकप भन्दा पनि यस वर्षको कोपामा ध्यान दिन पनि सुझाव दिएका छन् ।
‘मेस्सीको प्रतिभा र योगदानमा मैले कहिल्यै शंका गरिनँ । सायद कसैले गर्दैन । उनी अद्भुत प्रतिभा भएका खेलाडी हुन् । उनले बार्सिलोनामा जित्न बाँकी केही छैन । तर, अर्जेन्टिनामा उनी आजसम्म पनि उपाधिविहीन हुनु फुटबलकै लागि ठूलो दुर्भाग्यपूर्ण हो,’ अबिडालले भनेका छन्, ‘तीन–तीनपटक ठूला प्रतियोगिताको फाइनलमा पुगेर पनि चुक्नु यो भाग्यकै खेलबाड पनि हो कि ! मेस्सीले देशको जर्सीमा आजसम्म केही पनि जित्न नसक्दा म दुःखी छु । उनी आजसम्म अन्तर्राष्ट्रिय उपाधिविहीन हुनुपर्ने खेलाडी होइनन् । यो एकदमै अस्वभाविक छ, अस्वीकार्य छ । मेस्सी २०१४ मै विश्व च्याम्पियन बन्नुपर्थ्यो । तर ….. ।’
अबिडालले २०२२ को विश्वकप अर्जेन्टिनाका लागि नरहेको भन्दै मेस्सीले यस वर्षकै कोपा अमेरिका जित्न सबैखाले प्रयास गर्नुपर्ने बताए । ‘मेरो विचारमा मेस्सी र अर्जेन्टिनाका लागि २०२२ को विश्वकप होइन । यदि मेस्सीसँग अझै पनि अर्जेन्टिनालाई आफ्नो नेतृत्वमा च्याम्पियन बनाउने सपना र संकल्प छ भने उनलाई यस वर्षको कोपा अमेरिका अन्तिम मौका हो,’ अबिडालले भनेका छन्, ‘मेस्सीले जति गर्न सक्छन्, यसमै गर्नुपर्छ । देशका लागि जति दिन सक्छन्, यसै वर्ष दिनुपर्छ । किनभने, यसपटकको कोपा देशका लागि केही न केही जितेर फुटबल बिसाउन उनका लागि अन्तिम अवसर हो ।’
प्रकाशित मिति १० चैत्र २०७७, मंगलवार १२:४७